အားလုံးမျှဝေပါ - AllOne APK မှ EveryOne ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်: ဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်မျှဝေပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » productivity Apps ကပ » အားလုံး Share: လူတိုင်းနဲ့ File Transfer & Share ကို
အားလုံး Share: လူတိုင်း APK ကိုအတူ File Transfer & Share ကို
အော့ဖ်လိုင်းဝေမျှမယ်မိုဘိုင်းဒေတာမသုံးဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအရပ်တွင်ဖိုင်များကိုမဆိုအမျိုးအစား (Apps ကပ, ဗီဒီယို, ဓာတ်ပုံများ, ဂီတ, ရုံး, PDF ကို etc) ။ အဘယ်သူမျှမကေဘယ်ကြိုးတွေ, 3G, 4G needed.You မိတ်ဆွေများကမိုဘိုင်းဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့်ဖိုင်အမျိုးအစားသို့မဟုတ်အရွယ်အစားအဘို့အ anytime.No န့်သတ်ချက်မှဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။ အဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီး, ShareAll တတ်နိုင်သမျှအစာရှောင်ခြင်းအဖြစ်ဖိုင်ရှယ်ယာဖြည့်စွက်ပေးနိုင်သည်။
အင်တာနက်ကမပါဘဲကိရိယာကိရိယာမှဖိုင်များကိုမျှဝေပါ။ အဘယ်သူမျှမပြဿနာကိုသင်ဗီဒီယို, အသံ, ဓာတ်ပုံကိုဝေမျှနိုင်, ShareAll ၏အနီးအနား friends.The အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်နှင့်အတူဖိုင်ကိုသင်က Apps ကပ, ဗီဒီယို, ဓာတ်ပုံများ, ဂီတ, ရုံး (ပါဝင်သောကောင်းစွာအဖြစ်သီးခြားစီသို့မဟုတ်ပုံးတစ်ပုံးတစ် form မှာဖိုင်တွေ share နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ PDF ဖိုင်, .doc) သင်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များအခမဲ့မျှဝေခြင်း App ကို etc.Best ။ ဒေတာများကိုဝေမျှခြင်းမပြုမီနိုင်အောင်လွယ်ကူသောဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ SHAREALL နှင့်အတူ: File Transfer, မျှဝေခြင်းလုံးဝအခမဲ့မျှဝေန့်အသတ်ဒေတာပျော်မွေ့။
* အဘယ်သူမျှမ network ကိုကန့်သတ်, ဝေမျှမယ်ဖိုင်တွေအခါတိုင်း & နေရာတိုင်းမှာ!
* အဘယ်သူမျှမက USB! အဘယ်သူမျှမအင်တာနက်လိုအပ်!
* မြန်နှုန်း 20 M / s အထိတတ်၏။
* သီးခြား File ကိုဝေမျှခြင်း
* Bucket ခွဲဝေမှု
* အဘယ်သူမျှမ cable ကိုလိုအပ်
* မြန် Optimized နှင့်အစွမ်းထက် tool ကို
* မျက်နှာပြင်သော့ခတ် / ပိတ်ပင်သည့်အခါအလုပ်လုပ်ကိုင်မျှဝေခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုသိမ်းထားပြီး
အားလုံး Share: လူတိုင်းနဲ့ File Transfer & Share ကို
Luko စင်ပြိုင် App ကို Pvt Ltd မှ